Wanga uchiziva here kuti AirPods Max inokutendera iwe kugadzirisa pfungwa yeDhijitari Korona? | IPhone nhau
Waizviziva here kuti AirPods Max inokutendera kuti uchinje mafambiro eDigital Crown?
Eya, ichi chimwewo chinhu icho vazhinji vashandisi veiyo nyowani AirPods Pro vasingazive uye ndiko kuti iwe unogona kugadzirisa iko iko iko iko Dhijitari Crown inogadzirisa vhoriyamu. Naizvozvi, izvo zvinoitirwa izvo mushandisi anokwanisa kubata vhoriyamu yemahedhifoni mune yakasarudzika nzira kwaari tsika yatinoenda.
Mupfungwa iyi, patinowana maSystem eAirPods Max tinozoona zvimwe zvinonakidza sekushandura zita, kumisa kana kudzimisa iko kwekutsvaga kwekutsvaga kwemusoro kana iyo yatinozoona nhasi ino chinja mafambiro ekutenderera kwehuwandu hwevhoriyamu pakorona.
Ungachinje sei iko kutenderera pane AirPods Max
Izvi zvingaite kunge zvakaoma kuita asi zvinopesana.
Pinda iyo Zvirongwa zve iPhone
Dzvanya pane sarudzo yeBluetooth
Tsvaga iyo AirPods Max marongero nekudzvanya pane "i"
Chinja mafambiro ekutenderera kuti uwedzere vhorumu nekutsikirira pa "Dhijitari Korona" uye kusarudza sarudzo
Mamiriro acho anotibvumidza sarudzo mbiri dzekumisikidza izvo ndeizvi: kubva kumashure kuenda kumberi kuwedzera vhoriyamu nekushandura iyo Dhijitari Crown nenzira yewatch uye zvinopesana kubva kumberi kuenda kumashure izvo zvinotibvumidza isu kuwedzera iro vhoriyamu nekushandura korona inopesana nemawoko.
Mune ino kesi zvakakosha kuyeuka izvo kuva pane iOS vhezheni 14.3 kana kupfuura kuita uku kugadzirisa. Iyo nyaya yekugadzirisa kutenderera kwekorona kuti iwedzere kana kudzikisa vhoriyamu chinhu chisinga fanirwe nevashandisi vese asi zvakakosha kuti uzive kuti zvinokwanisika kuzviita uye pamusoro pese kuti ungazviita sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Waizviziva here kuti AirPods Max inokutendera kuti uchinje mafambiro eDigital Crown?
Apple inombomira kumhan'ara mhosva inopesana nePepear pamusoro peye logo zvakafanana
EU inovavarira nemitemo yayo mitsva pakushanda kweApp Store uye pre-yakaiswa mafomu